Zimbabwe's protest pastor Evan Mawarire arrested - BBC News
Zimbabwe pastor records video before arrest
A Zimbabwean Pastor, Evan Mawarire, has been charged with inciting public violence and disturbing the peace after a series of protests.
Zimbabwe's week of protests
Zimbabwe's economy is in dire straits, with civil servants going unpaid, the banks running out of money and a severe drought.
The 1.5m Zimbabweans facing hunger
Appeal for aid as 1.5m people in Zimbabwe are facing hunger according to the UN's World Food Programme.
Mugabe stumble caught on camera
The 90-year-old President of Zimbabwe, Robert Mugabe, is caught on film falling over in public.
A preacher in Zimbabwe has been arrested after leading a campaign against alleged government corruption and the poor handling of the country's troubled economy. Police have accused Pastor Evan Mawarire of inciting public violence and disturbing the peace. Last week, Zimbabweans staged the biggest protest against President Mugabe in a decade.Greg Dawson reports.